Toetran'ny fiompiana | Fiaretana haran-dranomasina
Ny famokarana trondro manerantany (wild and farmed) dia tombanana ho nahatratra 179 tapitrisa taonina tamin'ny taona 2018, miaraka amin'ny sanda mitentina 401 miliara dolara. Raha mahatratra latsaka ny antsasaky ny famokarana ny fiompiana anaty rano amin'ny 82 tapitrisa taonina, dia mitentina 250 tapitrisa dolara izany, izay 62% amin'ny sanda totaliny. Ny salanisan'ny fiompiana anaty rano isaky ny pounds dia ambony noho ny jono dia. Tamin'ny taona 2018, ny famokarana akondro dia nahitana biby anaty rano 82.1 tapitrisa taonina, ahidrano anaty rano 32.4 tapitrisa taonina, ary akorandriaka sy perla 26 taonina. Ny biby anaty rano dia anjakan'ny hazandrano mitotaly 54.3 tapitrisa taonina ka 47 tapitrisa no avy ao anaty, ary 7.3 tapitrisa dia avy amin'ny faritra an-dranomasina sy amorontsiraka. ref Ny famokarana ahidrano manerantany avy amin'ny fiompiana trondro dia andrasana hitombo ary hihoatra ny jono dia amin'ny 2030.
Source: misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFao 2020manokatra fisie PDF
Tamin'ny taona 2018, ny famokarana akondro dia:
Biby anaty rano 82 tapitrisa taonina (trondro - ranomasina sy ranomamy, molotra, crustacea, invertebrata an-dranomasina, sokatra anaty rano, ary sahona)
Ahidrano anaty rano 32 tapitrisa taonina
Akorandriaka sy perla haingo 26 arivo taonina ref
Ny kolontsaina sy ny fiompiana amoron-tsiraka dia namorona biby anaty rano 30.8 tapitrisa taonina (106.5 miliara dolara) tamin'ny taona 2018. Na eo aza ny fivoarana ara-teknolojia amin'ny fiompiana trondro an-dranomasina, ny fiompiana an-dranomasina sy ny morontsiraka dia mamokatra molluska betsaka kokoa noho ny hazandrano sy crustacea.
Famokarana jono sy fiompiana akondro iainana manerantany. Loharano: FAO 2020
Na eo aza ny fahasamihafan'ireo karazan-java-maniry maniry manerantany, ny karazany 20 ihany no mandrafitra ny ankamaroany (eo amin'ny 84%) amin'ireo trondro trondro voaangona. Ny ankamaroan'ny karazan-trondro trondro nambolena dia rano velona - ny karaoka, trondro ary tilapia voalohany indrindra. Milkfish (Chanos chanos) dia izao tontolo izao ny karazana hazandranomasina trondro trondro nambolena indrindra, izay nahatratra 2018 tapitrisa taonina ny isan'ny vokatra tamin'ny taona 1.32 ary misy 2.4% ny vokatra trondro voaangona. Nanomboka tamin'ny 2010 ka hatramin'ny 2018, ny isan'ny famokarana trondro dia nitombo 39% ho an'ny fiakarana isan-taona eo ho eo amin'ny 10% isan-taona. ref
Ny karazan-trondro tropika / subtropika hafa izay fambolena dia misy, fa tsy ferana amin'ny: barramundi, grouper, snapper, pompano (pomfret), croaker, drum vaovao, baskety japoney, cobia, ary ny fahalianany vaovao amin'ny bitro.